Sina : Tsy navela nihinana gilasy, novonoiny ny olon-tiany
ETAZONIA Nanapan-kevitra ny hisaona hateloana
Noho ny habetsahan’ireo olona nodimandry vokatry ny Covid-19, dia nanapan-kevitra ny hanokana 3 andro hisaonan’ny firenena i Donald Trump,
Burundi Nandroaka ireo solon-tenan’ny OMS hiala ny fireneny
Namoaka taratasy milaza ny fandroahana olona efatra, ao anatin’ny vondrona iraisam-pirenena ho an’ny fahasalamana na OMS,
Kaontinanta Afrikanina : Tokony hametraka paikady maharitra fahazoana rano
Samy nametraka paikady ao anaty hamehana hiadiana amin'ny aretina Covid-19 ireo governemanta Afrikanina saingy ny hamehana ara-pahasalamana ihany no nataon'izy ireo lohalaharana amin'izany hoy ny Banky Iraisam-pirenena.
Afrika Atsimo Orinasa iray amin’ny roa no tsy maintsy ho faty
Lasibatra noho ny fiparitahan’ny valanaretina « coronavirus » ihany koa i Afrika Atsimo. Araka ny fandinihin’ny mpahay toe-karena ao an-toerana dia orinasa iray amin’ny roa no tsy maintsy ho faty mandritra ity krizy ity.
« Coronavirus » 268.000 isa eo ireo maty manerantany
Maherin’ny 268.000 isa ireo olona maty eran-tany, hatramin’ny nisian’ny valanaretina « coronavirus ». Any Etazonia no nahitana faty olona betsaka indrindra, raha ny salanisa, satria mahatratra 76.928 ireo nodimandry.
Etazonia : Nisy namono ilay Profesora nikaroka momba ny Covid-19
Profesora iray any amin’ny Oniversite Pittsburgh any Pennsylvanie Etazonia no hita faty tao an-tranony tamin'ny 2 mey lasa teo. Voatifitra izy ary feno ratra ny lohany sy ny vatany.
Krizin'ny Covid-19 : Miha-be mamono tena ny japoney
Nahitana trangana famonoantena vokatry ny krizy ateraky ny Coronavirus any Japana.
Mpifankatia tera-tany sinoa no niady tany anaty tsena lehibe iray tao Henan, ao Chine ny faran’ny herinandro teo.
Resaka lagilasy no niteraka ny fifamaliana kanefa dia niafara tamin’ny fodiamandrin’ilay tovolahy ny raharaha. Araka ny fantatra, niara-tsena tao amin’ity tsena lehibe ity izy mivady ireo. Nandritra izany dia nilaza ilay tovovavy fa te hihinana mafy an’ilay gilasy namidy tao an-toerana izy, saingy tsy nanaiky ny hamoaka vola ho amin’izany ilay olon-tiany. Niitatra ny fifamaliana ary tafateny mafy be ren’ny olona nanodidina azy ilay tovolahy fa matavy loatra noho ny resaka hatendan-kanina ity olon-tiany ity. Sorena mafy ary nahatsiaro ho afa-baraka moa ilay tovovavy ka dia izay entana tandrify azy teo no namelezany ilay tovolahy. Mbola niezaka ny nanazava hatrany ilay tovolahy saingy naharay hety kosa ilay olon-tiany ary dia notsindroniny tamin’izany ny kibony. Noho ity zava-maranitra ity tafalentika lalina anefa dia tsy avotra intsony ny ain’ilay tovolahy rehefa tonga teny amin’ny tobim-pahasalamana. Notazonina am-ponja mandra-pitsara azy kosa ilay tovovavy. Araka ny fantatra anefa dia vao 2 volana izy ireo no niaraka, ka dia izao nifamono izao.